ဒါမျိုးဆိုရင် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ကြတယ်နော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဒါမျိုးဆိုရင် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ကြတယ်နော်
Posted by CharTooLan on Sep 13, 2010 in Photography | 19 comments
မြန်မာတွေလည်း ခေတ်မီကုန်ပြီ။ မော်ဒယ်တွေ Body paint တောင် ဆွဲခံလာပြီ။
ဘူလေး တွေလဲ ဟင်!!!
ဆေးရောင်ကွယ်လို လူအမြင်မှာ ၀ါးတားတား ဖြစ်သော်ငြား ဆေးခြယ်ဆရာ တနေရာစီ အာရုံပြုလို့ အသေးစိတ် စုတ်တံနဲ့ ပွတ်သပ် ခြယ်သ ခံတာကလည်း ခေတ်မီတာလား။ အရှက်တရား ကင်းမဲ့ တာလား.. ငါးခုံးမ တကောင်ကြောင့် တလှေလုံးပုတ်တဲ့ ဘ၀ ရောက်အောင် ဆွဲသွင်းနေချင်ကြတာလား။ အသိတရား နုငယ်သေးတဲ့ တက်သစ်စလေးတွေ ဖာလိုင်းသွင်းတာလား။ လား လား နဲ့ တွေးစရာဘဲ
အော် ဆူးရယ်…ဒီလောက်တောင်မှ ပြောစရာမလိုပါဘူးဗျ။ နိုင်ငံတစ်ခု တိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုယင် အဘက်ဘက်က တိုးတက်မှသာ တစ်နိုင်ငံလုံး တိုးတက်နိုင်တာပါ. ဒီလိုပါပဲ နည်းပညာ ၊ ဖက်ရှင်….အစရှိတဲ့ အနောက်တိုင်းရဲ့ တိုးတက်မှု့တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့ တတိယနိုင်ငံတွေအထိအကုန် ကူးစက်တာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ပြန်စဉ်းစားရမှာက တစ်ခုခုကို လိုချင်ယင် တစ်ခုခုကိုပြန်ပေးဆပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ စကားရှိလေတော့ ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှု့တွေဟာ ကောင်းတက်ဘက်ကရှိသလို မကောင်းတဲ့ ဘက်ကလည်း အများကြီး တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနေတာပါပဲ။ နောက် သူက Body paint ဆွဲတာကို “ဆေးခြယ်ဆရာ တနေရာစီ အာရုံပြုလို့ အသေးစိတ် စုတ်တံနဲ့ ပွတ်သပ် ခြယ်သ ခံတာကလည်း ခေတ်မီတာလား။ အရှက်တရား ကင်းမဲ့ တာလား..”ဆိုတာကတော့ မြန်မာမတွေ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မဟုတ်ဘူး နိုင်ငံခြားတိုင်ပြည်တွေမှာလည်း ဒီလိုမျိုးတွေက အများကြီးပါ။ ဒီတော့ အမေရိကန်မှာ ယိုးဒယားမှာ ပြည်တန်ဆာတွေကို တရားဝင် ရပ်ကွက်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်ပြီး မမေရိကန်တို့ ယိုးဒယားတို့ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ နည်းပညာတိုးတက်မှု့တွေကြောင့် ကောင်းတာတွေဖြစ်နိုင်သလို မကောင်းတာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်မှာပါပဲ။ ဒါကိုက လောကသဘာဝတစ်ခု ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကို ဘယ်သူမှ ပြုပြင်ထိန်းကျောင်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တက်နိုင်တာက ကိုယ်အနီးဝန်းကျင်က သူတွေကိုပဲ ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးကြဖို့ ကာကွယ်ကြဖို့ပါပဲ။
သေချာ စဉ်းစားကြည့်ရင် ဒါလည်း အနုပညာတစ်ရပ်ပါပဲ… ခန္ဓာကိုယ် မလှပတဲ့သူတွေ ဘယ်သူဆွဲခံရမလဲ… သူလှလို့ သူ့ ဆွဲခံတာလေ… ဘယ်သူ့ထိခိုက်တာမှတ်လို့… ကိုယ်က သူ့ကိုကြည့်တဲ့ မျက်လုံးတွေ အမြင်တွေကိုသာ ပြင်စမ်းပါ… ကိုယ်က ဒါတွေကို မြင်တာနဲ့ တဏှာစိတ်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တဏှာဆီပဲ ရောက်မှာပဲ… သူ့ရဲ့ ပန်းချီပညာ အလှအပတွေကို အနုပညာ မျက်လုံးနဲ့ ခံစားကြည့်စမ်းပါ… လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ အနုပညာတစ်ရပ်ပါပဲ…
ခုံပေါ်မှာ ကော့ထိုင်နေပြီးတော့ ဟိုဘက်လှည့်နေတဲ့ မမ က ဘောင်းဘောင်းဝတ်ထားသလားကွယ်
ပြည့်တန်ဆာ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို လူတွေတော်တော်များများက မကောင်းဘူး မကောင်းဘူးနဲ့ ပြောနေကြပါတယ်.. အထူးသဖြင့် အမျိုးသားတွေ တော်တော်များများရဲ့ ပါးစပ်ဖျားက မချပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပါ… ပြည့် – တန် – ဆာ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြန်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါ… တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ တန်ဆာလို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုနိုင်တာပေါ့နော်… သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် မှန်ပါတယ်… ပြည့်တန်ဆာလုပ်စားတဲ့ သူတွေဆိုတာ တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ တန်ဆာတပါးလို သဘောထားသင့်ပါတယ်… လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုလေ… ပြည့်တန်ဆာ အလုပ်ကိုရော လူတွေက ဘာဖြစ်လို့ ရွံစရာ မုန်းစရာ… အလုပ်တစ်ခုဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်တဲ့ အရာတစ်ခုလို သဘောထားနေကြတာလဲ… အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေ ပါပဲ…စဉ်းစားကြည့်ရင် အဲဒီ ပြည့်တန်ဆာတွေဆီကိုရော ဘယ်သူတွေ သွားလဲ… အခကြေးငွေတွေပေးပြီး ဘယ်သူတွေ သွားလုပ်သလဲ… ယောက်ျားတွေပါပဲ… အဲဒါဆိုရင် ဒီယောက်ျားတွေပဲ သွားနေ လာနေ အသုံးပြုနေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ပါးစပ်က မကောင်းပါဘူး… နောက်ကွယ်ကျရင် လုပ်ချင်ရာ လုပ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်နေကြတာ မဟုတ်လား… နောက်ပြီးတော့ ဒီဆေးရေးပန်းချီဆွဲခံတာကို ပုံကြီးချဲ့ကားပြီးပြောနေကြတယ်… တခြားရိုးသား လိမ္မာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေးလှပါတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရော နောက်ကွယ်မှာ ကောင်လေးတွေနဲ့ ဟိုတယ်မှာ အိပ်လိုအိပ်… လူကွယ်ရာ လစ်လပ်ရာမှာ ချိန်းတွေ့ပြီး လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြတာပဲ မဟုတ်လား… အကုန်လုံးကို ဆိုလိုချင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး… ဒါပေမယ့် တော်တော်များများ ပါဝင်မှာပါ… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ပြန်တွေးကြည့်ပေါ့… ဒီဆေးပန်းချီရေးဆွဲခံတယ်ဆိုတာက ယောက်ျားလေးနဲ့ လူမမြင်ကွယ်ရာမှ အတူတူအိပ် လိင်ဆက်ဆံနေတာ မဟုတ်ပါဘူး… သူ့ရဲ့ အလှတရားတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသခွင့် အနုပညာကို ခံစားတင်ပြနေတယ်လို့ပဲ ကျနော်ကတော့ မြင်တယ်… လူတွေကတော့ ပြောကြမှာပေါ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီး… မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုက ကောင်းပါတယ်.. အရမ်းကို အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားလည်း ထားသင့်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ ဒီအတိုင်း ရှိနေတာကြီးကိုပဲ ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ နေမှာလား… အဲလိုမဟုတ်ရင် ယဉ်ကျေးမှုကို ဒီထက်ကောင်မွန်တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်မလား ဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစားကြည့်ဖို့ လိုပါသေးတယ်… တချို့လူတွေက လူရှေ့မှာသာ သူတော်ယောင်ဆောင် လူနောက်ကွယ်ကျရင် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တွေကလည်း အများသား… အဲလိုမျိုး လူတွေက လူရှေ့သူရှေ့မှာဆို ဒီလိုလုပ်တာကိုပဲ မှားလှချည်ရဲ့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ … အဲဒီလိုမျိုး လူရှေ့မှာ သူကောင်းလုပ်ပြ ပြောပြနေတဲ့ သူတွေကို သတိထား… နောက်ကွယ်ကျရင် ပိုဆိုးနေတတ်တယ်… ကိုတွေ့… ပြောချင်တာတွေက များနေတော့ ရေးရတာကလည်းပျင်း… စာကလည်း ကောင်းကောင်းမရေးတတ်… အဲတော့ ဟိုရောက်လိုက် ဒီရောက်လိုက် ဖြစ်သွားတယ်… ဘယ်သူကိုမှ ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး… စဉ်းစားမိတာလေးပါ
ဟုတ်တယ်၊ အနုပညာတစ်ရပ်အနေနဲ့တော့ လက်ခံပါတယ်ဗျာ၊ လူတိုင်း မလုပ်နိုင်ပါဘူး၊ … ကျွန်တော့်သာ ဒီလိုဆွဲခိုင်းရင် လက်တုန်နေတာနဲ့ ဘာပုံမှ ထွက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး၊
ဆွဲတဲ့သူကလည်း လက်တုန် … ခံရတဲ့သူကလည်း သက်သာမှာ မဟုတ်ဘူးနော်… ယားကျိ ယားကျိနဲ့နေမှာ ထင်တယ်… ဟီးဟီးဟီး… အဲဒါကိုက ချီးကျူးစရာ
ဆိုတဲ့ သဘောတွေပေါ့ လေးစားပါတယ်………….
ဒီလို ဆေးပန်းချီဆွဲခံတာလောက်လေးကတော့ အသက်ပေးစရာ မလိုပါဘူး… ဒီ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆေးပန်းချီဆွဲတယ်ဆိုတာ ရိုးရိုးပန်းချီဆွဲတာထက် အဆမက ပိုမို ခက်ခဲပါတယ်… လူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အသားအရေနဲ့ ကိုယ်ဆွဲလို့ လိုက်ဖက်မယ့် ဆေးရောင်တွေ ရုပ်ပုံတွေကို ဆွဲတယ်ဆိုတာ တော်တော်လေး ခက်ခက်တဲ့ အနုပညာတစ်ခုပါ… အရမ်းကို အနုပညာဆန်တဲ့ ဟာတစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပါသေးတယ်…
ဒါ 21 ရာစုရဲ့အနုပညာတရပ်ဘဲ သူများနိုင်ငံတွေမှာအနုပညာတရပ်အနေနဲ့ရေးဆွဲနေတာကြာပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုအရခုလောက်နောက်ကျနေတာဖြစ်မှာပါ
ဘာလို့ အနုပညာ ကို ပြည်တန့် ဆာလို့ စွပ်စွဲတာလဲ ဟင် နားကိုမလည်နိုင်ဘူး အဲဒီပုံတွေက လိင်ဆက်ဆံနေလို့ လား၊ ပြီးတော့ နောက်တစ်ချက် ပြည့် တန်ဆာ ဆိုတဲ့ sexual workers တွေကို ဒီမှာဘာလို့ နှိမ်နေကြတာလဲ၊ သူတို့ခိုးစားလား ၊ဖွက်စားလား ၊ ကို့ ပိုင်တဲ့ ခန္ဒာ နဲ့ အရင်းပြု ပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်ရာ မှာ အပြစ်ရှိသွားခဲ့ လား
နောက်တစ်ချက် ခင်ဗျားတို့ ခေါ်နေတဲ့ ဖာ ဆို တဲ့ ပြည့်တန်ဆာ က ခင်ဗျားတို့ ပြောတဲ့ မြန်မာ ပီသ ပါတယ်ဆို တဲ့ ရှေးမြန်မာတွေခေတ်ထဲ က တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ သံတမာန်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာ မသိလို့ လား ဟင် ကျွန်တော် က ချီးမြှောက်ဖို့ ကိုပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ မကဲ့ရဲ့ ပါနဲ့မရှုံ့ ချ ပါနဲ့ သူ့ အလုပ်သူလုပ်ပါလေ့ စေ ကို လဲ ကို့ အလုပ် ကိုလုပ်ပါး) no offense peace out ;)
တော်ပါဗျာ အနုပညာအနုပညာနဲ့ ပါးစပ်ယားလို့၊ အော့နုလုံးနာတယ်။
တကယ်တမ်းပြောရရင် အ၀တ်အစားမပါဘဲ အလှပြတာကို ကျနော်တို့ မြန်မာတွေက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီးပြတာတွေကို
ကျနော်အမြင်ကတော့ ဖုံးကွယ်ထားသောအလှတရားကို မြင်အောင်ကြည့်ရတာကပိုအဖိုးတန်တယ်ထင်ပါတယ်။
လူထီးဖြစ်ဖြစ် လူမဖြစ်ဖြစ် အတူတူပါတာ မဆန်းဘူးဆိုပြီးအားလုံးသာ ဘာမှမ၀တ်ဘဲနေမယ်ဆိုရင် …………………………
ဒါ လိုအပ်လို့ ပေါ်လာတာဘဲဖြစ်မယ်။
မလိုအပ်ရင် ခဏနဲ့ ပြန်ပျောက်သွားမှာပါ။
အပေါ်က Team X ပြောသွားတာလေး သဘောကျတယ်
ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကတော့ တော်တော်လှတာပဲ။ တော်လိုက်တာ။